पहिलो फुल बडी ट्रान्सप्लान्टको तयारी हार्बिन (चीन) के कुनै एउटा मानिसको टाउको अर्को मानिसको शरीरमा सार्न सम्भव होला ? के कुनै व्यक्तिको गर्दनमुनिको भाग पुरै परिवर्तन गर्न सकिएला ? धेरैले उत्तर देलान्, यस्तो असम्भव र हावादारी कुराको पछि नलागेकै बेस । तर, चीनका एक डाक्टर अहिले यही अभियानको अन्तिम…
सेल्फीले खोसिदियोे रोजी रोटी
सेल्फी अर्थात् आफै खिचिएको आफ्नो फोटो । सेल्फी संस्कृति बढेसँगै मानिसलाई आफ्नो फोटो खिचिदिनका लागि कोही खेतालो खोज्नुपर्ने झण्झट त हटेको छ, तर यसले धेरै मानिसको रोजीरोटी नै खोसिदिएको छ । सेल्फी संस्कृति मौलाउँदै जाँदा पर्यटकीय स्थलहरुमा फोटो खिच्ने पेशा अपनाएका फोटोग्राफरहरुको जिन्दगी निकै मुस्किल बनेको छ, सायद यसतर्फ कसैको…
आमाको पेटमा बच्चाको सट्टा स्पोर्ट्स कार !
भारतको नयाादिल्लीमा एउटा आमाको कोखमा बच्चाको सट्टा स्पोर्ट्स कार भेटिएको छ । ती महिलाका पतिले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हालेपछि घटना बाहिर आएको हो । भारतीय अनलाइन अमर उजालाका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षदेखि यी दम्पत्ति बच्चाको आशमा थिए । पत्नीले वाइवीएफ पद्धतिमार्फत छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । छोरी ६ महिना हुादा उनी…
स्कुलको अनौठो नियम, केटालाई स्कर्ट, केटीलाई सुरुवाल
बेलायतमा झण्डै ८० वटा स्कुलले लैंगिक तटस्थ स्कुले पोशाकको नमूना पेश गरेका छन् । जस अन्तरगत पाँच वर्षको उमेरसम्मका विद्यार्थीहरुले स्कुल आउँदा आफुखुसी पोशाक लगाउन पाउनेछन् । पाँच वर्षसम्मका बालक विद्यार्थीले स्कर्ट लगाउन सक्नेछन् भने बालिका विद्यार्थीले सुरुवाल । द सन्डे टाइम्सका अनुसार यी विद्यालयहरुले आफ्नो पोशाक संहिताको माध्यमबाट एकातर्फ…
बाउछोरीले चलाएको रेष्टुराँ, जहाँ ग्राहकलाई सेक्स पस्किइन्छ
रेष्टुरेन्टमा सेक्स पस्किन्छ भन्ने कुरा सुन्दा बित्तिकै तपाइँले अड्कल काट्नुभयो होला त्यो रेडलाइट एरियाको कुनै रेष्टुरेन्ट हो जहाँ यौनधन्दा हुन्छ । तर होइन, यो रेष्टुरेन्ट त्यस्तो अनैतिक क्रियाकलापको अखडा होइन । तर पनि यसले ग्राहकलाई सेक्स पस्किरहेको हुन्छ । हो चीनको बेइजिंगस्थित एस एण्ड एम रेष्टुरेन्टले ग्राहकलाई सेक्स टक्राउँछ ।…
काठमाडौं, असार ४ / ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो राज्यमा ओलम्पिक्स सुरु हुन ५० भन्दा कम दिन बाँकी रहँदा वित्तीय आपत्काल घोषणा गरिएको छ । आफ्नो घोषणासँगै रियोका अन्तरिम गर्भनर फ्रान्सिस्को दोर्नेल्सले राज्य ‘टाट पल्टिएको’ प्रस्ट पारेका छन् । उनले गम्भीर आर्थिक संकटको चुनौतीका कारण प्रतियोगिताअघि विशेष कदम चालिनुपर्ने बताए । आपत्काल घोषणाले…
अब टेलिभिजन केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र रहेन यसले लामखुट्टे भगाउने काम समेत गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरियाली कम्पनी एलजीले यस्तो टेलिभिजन ल्याएको छ जसले लामखुट्टे भगाउनेछ । साँच्ची अब लामखुट्टेबाट बँच्नका लागि कुनै मस्क्यूटो क्वाइल वा झुलको आवश्यकता पर्नेछैन । मात्र, टेलिभिजन खोल्नुहोस् लामखुट्टे भागिहाल्नेछ । एलजीले आफ्नो नयाँ…
पेरिस, जेठ ३२ । जीवनमा एउटा कुखुराले कति यात्रा गर्ला ? घर, करेसाबारी, खोरमा सीमित हुने कुखुरा विश्व भ्रमणमा निस्कियो भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । एक फ्रेन्च नागरिकले आफूसँगै कुखुरालाई लिएर विश्व भ्रमण गर्दैछन् । समुद्री मार्गबाट विश्व भ्रमण गरिरहेका तीन युवक र कुखुराको तस्वीर हालै फ्रेन्च मिडियामा प्रकाशित भएपछि…
एजेन्सी । मानव तस्करीका लागि मेक्सिकोको अपराधिक संगठनहरु विश्वभर फैलिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । मेक्सिको सरकारले अपराधिक संगठनलाई तह लगाउन नसक्दा यस्ता अपराधिक घटनाहरु धेरै हुने गरेको छ । एउटी युवतीले मेक्सिकोमा आफुमाथि भएको हिंसाबारे बोलेकी छिन् । उनी हुन् कार्ला जासिन्टो । उनलाई लाग्छ उनी ४३ हजार २…
‘मिस युनिभर्स’ को दाबेदारीमा उत्रिएका सुन्दरीहरु (फोटोफिचर)
मेस्सी र रोनाल्डो: विश्वकपमा कीर्तिमान बन्दा चुकेका दुई स्टार